शुक जसले ट्रक दुर्घ’टनामा डेढ वर्षीय छोरा श्रीमती सहित परिवार गु’माए : अझै हो’स खुलेको छैन् ! – Dainik Samchar
शुक जसले ट्रक दुर्घ’टनामा डेढ वर्षीय छोरा श्रीमती सहित परिवार गु’माए : अझै हो’स खुलेको छैन् !
April 8, 2021 237
पोखरा, – जिल्ला अस्पताल भवन बनाउन सिमेन्ट बोकेर उकालो लागिरहेको ट्रक मनाङको नासों गाउँपालिका ४ कोतोमा पुग्दा नपुग्दै ब्रेकमा समस्या आयो । पहाडको अप्ठ्या’रो बाटो त्यसमाथि ‘हे’भ्भी वेट’ ट्रक ।
चालकले उकालो सहज बनाउन ट्रक ‘ब्याक’ गर्दानगर्दै चि’प्लिँदै ट्रक सोझै मस्र्याङ्दीमा ख’स्यो । करिब ४५ मिटर तल खसेको ट्रक सीधैं नदीमा रहेको ठूलो ढुं’गोमा ब`जारिन पुग्यो । ट्रकमा सवार ८ जनामध्ये ३ जनाको घ`टनास्थलमै ज्या`न गयो । बाँकी ३ जनाको उपचारका क्रममा मृ`त्यु भयो ।
त्यही ट्रकमा सवार थिए, नासों गाउँपालिकाकै शुक गुरुङको परिवार । ट्रकमा शुककी श्रीमति ३५ वर्षीय मनिषा गुरुङ र डेढ वर्षीय छोरा लियोन गुरुङ थिए । मनाङ धारापानीमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका शुक गुरुङ कोतोमा भएको ट्रक दुर्घ`टनामा परिवार गु`माएपछि अहिलेसम्म हो`शमा आउन सकेका छैनन् ।
दुर्घ`टनामा घट`नास्थलमै ज्या`न गुमाएका जलकाशी गुरुङ उनकै साली अर्थात् मनिषाकै बहिनी थिइन् । परिवारमै गु’म्ने गरी बज्र`पात परेपछि शुकका आँखा खुल्न सकेको छैन । ‘एकपछि एक बज्र`पात आइलाग्यो । केही समयअघिमात्रै उहाँले आफ्नो दिदी गु’माउनु भो । एक हप्ताअघिमात्रै उहाँको सोल्टीको काठमाडौंमा उपचारकै क्रममा मृ`त्यु भयो,’ आफन्त दिल गुरुङले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उहाँ अझै बेहो`शै हुनुहुन्छ । हो`श आएको छैन ।’
शुकको सोल्टी नाता पर्ने गत हप्तामात्रै काठमाडौंमा मृ`त्यु भएको थियो भने फागुन २० मा युकेमै दिदीको मृ`त्यु भएको थियो । उनी अहिले मनाङमै छन् । ‘बुहारी (मनिषा) पनि आफन्त बितेपछि त्यहाँ गएर आइराखेकी रैछिन् । कहाँबाट ट्रक चढेको भन्ने थाहै भएन,’ दिलु गुरुङले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङका डिएसपी सुवास खड्काका अनुसार उनीहरु मनाङ, लमजुङ सीमाना जगतदेखि ट्रक चढेका थिए । ‘सबै जना जगतबाट ट्रक चढेर मनाङतिर लाग्नु भएको प्रारम्भिक अध्ययननबाट खुलेको छ,’ डिएसपी खड्काले नेपाल प्रेससँग भने । उनका अनुसार चालक र सहचालकबाहेक दुर्घ`टनामा परेका सबै आफन्ती नै हुन् ।
घट`नास्थलमा मृ`त्यु भएका ३ जनाबाहेक उपचारका लागि लमजुङ ल्याउँदै गर्दा २ जनाको मृ`त्यु भएको थियो । लमजुङमा मृ`त्यु हुनेमा लमजुङकै मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ५ का लक्ष्मण नेपाली र मनाङको चामे गाउँपालिका ४ का धनमान विक छन् । नेपाली ट्रकका सहचालकसमेत हुन् लमजुङमा उपचार सम्भव नभएपछि ३ जनालाई थप उपचारका लागि चितवन रेफर गरिएको थियो । त्यसमध्ये राति चितवनमा उपचारकै क्रममा ७ वर्षीय थिउन गुरुङको मृ`त्यु भएको थियो ।
चितवनमा उपचार भइराखेका ७ वर्षीय निहल गुरुङको अवस्था सामान्य छ । तर, ट्रक चालक तनहुँ भानुका २१ वर्षीय सुमन तामाङको अवस्था ग`म्भीर रहेको डिएसपी खड्काले जानकारी दिए । मालवाहक ट्रक दुर्घ`टना भएको थाहा भए पनि अस्पतालकै सामान भएकोबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको जिल्ला अस्पताल मनाङले जनाएको छ ।
घ`टनास्थलमै मृ`त्यु भएका ३ जनाको श`व पो`स्टमा`र्टमका लागि त्यही लगिएको भए पनि ट्रकले बोकेको सामानबारे आफूलाई थाहा नभएको अस्पताल प्रमुख डा प्रतिभा गौलीले बताइन् । ‘अहिले जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण चलिरहेको त छ । बीचमा हिमपातले काम केही रोकिएको थियो,’ डाक्टर गौलीले भनिन्, ‘दुर्घ`टना भएको ट्रकले ठ्याक्कै कसको सामान बोकेको हामीलाई जानकारी आएको छैन ।’
करिब १९ करोड रुपैयाँ लगानीमा भवन जिल्ला अस्पतालको २ तले भवन निर्माण भइरहेको डा गौलीले जानकारी दिइन् । साउनदेखि सुरु भएको योजना ३० महिनाभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको उनले बताइन् । ‘३० महिना भए पनि बीचमा धेरै समय काम रोक्नु परेकाले केही ढिलाइ हुन सक्छ,’ उनले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेका अनुसार दुर्घटना भएको ट्रक अस्पताल भवन निर्माण ठेकेदार कम्पनीको ट्रक दुर्घ`टनामा परेको हो । नौलो धुन बाट
Prevराज्यको तलब लिने सबैका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना हुनुपर्ने
Nextएकै दिनमा यति धेरैले बढ्यो सुनको भाउ तोलाको कति हेर्नुहोस?
स्टाफ नर्स आमाको कोरोनाका कारण मृत्यु, ३ महिने दुधे बालकको बिचल्ली !
एकाबिहानै श्री पशुपतिनाथ को दर्शन गरी भेटी स्वरुप शेयर गर्दै पढ्नुहोस् आज चैत्र २४ गते मंगलबार, को राशिफल
सरकारले थप्यो चाडपर्व बिदा, जनैपूर्णिमा, माघे संक्रान्ति देखि यस्ता छन् विदाका दिन
बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल (1198)
मनमा अलिकती पनि दया माया भएआफ्नै दाजु भाइ सम्झेर RIP लेखी सेयर गर्दिनु होला।????भाइको आत्माले शान्ती पाउनेछ (722)